Otu mmasị WTN ọhụrụ na chọrọ njem mba ụwa, ọgwụ mgbochi, ule
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Otu mmasị WTN ọhụrụ na chọrọ njem mba ụwa, ọgwụ mgbochi, ule
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • WTN
The Network Tourism Network (WTN) nwere mkparịta ụka mbụ ụnyaahụ ka a ga-esi meghachi omume na ọnọdụ na-apụta na nje Omicron ọhụrụ, yana otu esi emeghachi omume.
Akpọrọ South Africa dị ka mpaghara dị ize ndụ n'ihi ụdị COVID ọhụrụ Omicron, dị ka ọkwa sitere na Òtù Ahụ Ike Ụwan, mgbe n'ezie ụdị ọhụrụ a na-agbasalarị n'ọtụtụ mba nke ụwa.
Nke a na-ebute mfu na ndakpọ olileanya ugbu a, ma na-eyi egwu ọrụ na mgbake nke njem njem na njem nlegharị anya, kpọmkwem na South Africa.
Omume a butere ikewapụ ndịda Afrịka n'ụwa ndị ọzọ. O nwetara ndị otu Ndị njem nlegharị anya nke Africa iwe, na okwu ọkụ ugbu a na-ezigara otu ATB Member WhatsApp.
The Network Njem Nleta Ụwa were ohere a wee kpọọ onye isi WTN Dr. Walter Mzembi, onye bụbu onye minista na-ahụ maka mba ofesi na onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Zimbabwe, nakwa onye ga-azọ ọkwa odeakwụkwọ ukwu UNWTO. Ọ kọwara mmetụta ndị ahụ, ụzọ aga n'ihu, ma kesaa ahụmahụ ya.
Sitekwa n'Africa, Joseph Kafunda, onye isi oche nke otu Emerging Tourism Enterprise Association na Namibia, onye na-enweta ihe nrite onye njem nlegharị anya, na onye nnọchi anya World Tourism Network, nyere nkọwa ya n'okwu a.
Mmezi site na Dr. Peter Tarlow (USA) Onye isi ala WTN na onye ọkachamara mba ụwa ama ama na njem na njem nlegharị anya, gere ntị ma kwuo maka ntinye sitere n'aka ndị òtù WTN na Jamaica, Canada, USA, Germany, na mba ndị ọzọ.
WTN etolitela ugbu a Achọrọ njem, ule & ọgwụ mgbochi otu mmasị ma na-aga n'ihu ịkpọbata ndị isi ihe sitere na ọha na eze na nkeonwe ka ha kwalite maka ndụmọdụ ndị nwere ike ịrụ ọrụ na isiokwu a.
WTN nwere ndị otu ugbu a na mba 128. Ozi ndị ọzọ gbasara nzukọ na otu dị na www.wtn.travel